Elegant • Umzimba Hlikihla futhi NuRu Massage
0 (Izibuyekezo ze-0)
Uyemukelwa eTantra eSan Francisco naseSilicon Valley!
Noma ngabe ufuna okwedlulele ekwelashweni kokuhlikihla noma ekumodeleni okuyimfihlo nakuma-spa resort travels package, sinikela ngamamodeli aphezulu wezokwelapha wesipiliyoni sakho senkanuko!
I-Tantra Kundalini Massage - ukuhlanganisa amasu amahle wokwelapha umzimba wonke, kufaka phakathi amasu enkanuko yokwakha nokwandisa amandla ne-ecstasy emazingeni aphakeme kakhulu. Kufaka phakathi i-organic aromatherapy bath ne-soapy massage kanye ne-sensible body wash & 24 karat body body, i-organic honey ecstatic bodies siko, ukuqeqeshwa kwamasu we-tantra okuyimfihlo ukukusiza ukuthi ufinyelele futhi wandise amazwe aphezulu wamandla, kundalini & ecstasy! Hlola ukuthi ungayithuthukisa kanjani injabulo yabesifazane ngokusebenzisa amasu we-tantra. Singanikeza inhlalakahle eyengeziwe nenjabulo ngekhwalithi ephezulu, amadivayisi ebanga lezokwelapha abesilisa nabesifazane. Sikukhuthaza ukuthi utshale impilo yakho nenjabulo yakho!
Bonisa more Fihla konke
Isifunda Sezimali, iSan Francisco, CA, e-USA
0 Isisekelo kuzibuyekezo ze-0
Ngena ngemvume ukubuyekeza
Ngiyacela, sombulula i-captcha